Dalada SSE:Boogaadinta, soo dhoweynta, saadaasha sannadka cusub 2016 iyo Xasuusta sannadka tagey |
Dalada SSE:Boogaadinta, soo dhoweynta, saadaasha sannadka cusub 2016 iyo Xasuusta sannadka tagey
London (GNN)-Ugu horreyn Dalladu waxay idiin soo gudbineysaa hambalyada sannadka cusub. Ilaahay ayaynu ka rajaynaynaa inuu wakhtigaa, wakhtigiisa inagu wada gaadhsiiyo caafimaad taam ah iyo cibaado toosan(Aamiin). Dallada kulmisa ururada iyo bulshada reer Somaliland ee Yurub (Somaliland Society in Europe) ayaa idinla wadaageysa xasuusta sannadka laga gudbayo ee 2015 iyo sannadka inagu soo fool leh ee 2016.
Sannad walba dhammaadkiisa dallada SSE waxay si dareen ku jiro idinla wadaagtaa dhacdooyinka togan iyo kuwa taban ee sannadka la soo dhaafay iyo hiigsiga sannadka fooda inagu soo haya.
Sannadka 2015 waxa taariikhda gashay markii Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu qaatay go’aan uu ku cadeeyay in aanau mardambe isu-soo taageyn Doorashada Madaxweynanimada Somaliland, taasoo dhif iyo nadir ah inuu Sameeyo Madaxweyne ka soo jeeda Qaarada Afrika oo guud ahaan lagu xanto xukun jeclaysi iyo weliba keli talsinimo.
Xorriyadan iyo nimcadan Ilaahay ina siiyay waxaynu ku ilaalin karnaa caddaalad iyo garsoor ku salaysan eex la’aan iyo sinaan iyadoo weliba loo naxariisanayo bulshada inta taagta daran.Sannadka cusub ee 2016ka Dallada SSE waxay guud ahaan u rajaynaysaa mar labaad reer Somaliland inay ku sugnaadaan isku duubnida iyo wada jirka loo baahanyahay.